Hyperbaric Oxygen Therapy - HBOT Therapy - Hyperbaric Therapy
Hyperbaric Oxygen Therapy - HBOT Therapy- Hyperbaric Therapy
musha/Hyperbaric Oxygen Therapy - HBOT Therapy- Hyperbaric Therapy
Hyperbaric Oxygen Therapy - HBOT Therapy- Hyperbaric Therapyteknamfg2018-01-21T06:10:26+00:00
Hyperbaric Oxygen Therapy, inozivikanwawo se HBOT, chirwere chinoponesa 100% oksijeni kumurwere wemapurmoni system pavanenge vari mukati memakamuri ekudzvinyirirwa. Murefu ari kufema okisijeni pane zvakakura zvikuru kupfuura 21% inowanika munzvimbo yakakwana yegungwa mumhepo.
Hyperbaric Therapy inobva pamitemo miviri inokosha yefizikiki.
"Mutemo waHenry"Inotaura kuti uwandu hwegesi hwakanyungudutswa mumvura hunofanana nekudzvinyirira kwegasi pamusoro pemvura, kunze kwekuti pasina chikemikari chinoitika.
"Mutemo waBoyle"Inotaura kuti pakushambidzika nguva dzose, ivhu uye kuwedzera kwegesi zvakasiyana.
Izvi zvinoreva kuti gasi richadzivirira zvakaenzana nehuwandu hwemhepo inoshandiswa pairi. Kushandisa mitemo iyi Oxygen Therapy inobvumira kuti oksijeni yakawanda iendeswe kumatumbu uye nhengo.
Iko kukura kwesimba rinokonzerwa neokisijeni pamasero emagetsi kunogona kukurumidza kuita zvirongwa zvekuporesa uye kubatsira mukugadzirisa kubva pane zviratidzo zvakawanda.
Migumisiro yechirwere ishoma uye haigoni kutora kwenguva refu. Hyperbaric Medicine haisi mushonga wezviratidzo zvakawanda asi yakaratidza kuwedzerwa zvirwere zvekudzivirira muviri, kubatsira varwere vane matambudziko kubva kune maronda asingagumi kusvika kuhutano hwekuremara uye kuora kwehutano.
Hyperbaric Oxygen Therapy History
Ichi kurapwa kunogona kuteverwa kumashure kwe1600's.
Mu 1662, yekutanga Hyperbaric Chamber yakavakwa uye inoshandiswa nemufundisi weBritish anonzi Henshaw. Akavaka chivakwa chinonzi, Domicilium, iyo yaishandiswa kurapa maitiro akasiyana-siyana.
Mune 1878, Paul Bert, chiremba wezvechirwere cheFrance, akawana kubatana pakati pekuderedza chirwere uye nitrogen bubbles mumuviri. Bert akazoona kuti kurwadziwa kwaigona kugadziriswa nekudzorerwa.
Pfungwa yekurapa varwere pasi pemamiriro ekudzvinyirirwa yakapfuurirwa nechiremba wechiremba wechiFrench Fontaine, uyo akazovaka gorozi rinoshandiswa rekufambisa kushambadzira mu1879. Fontaine akawana kuti inhaled nitrous oxide yakanga ine simba guru pasi pekumanikidzwa, kuwedzera kune varwere vake vakagadzirisa oksijeni.
Mukutanga kwe1900 yaDr. Orville Cunningham, purofesa weanesthesia, akaona kuti vanhu vane zvirwere zvemwoyo zvakanyanya zviri nani pavakagara pedyo nechepamusoro pegungwa pane avo vanogara munzvimbo dzakakwirira.
Akabata mumwe waaishanda naye uyo akanga achitambura nefivha uye akanga ava pedo nekufa nekuda kwekudziviswa kwemapapu. Kubudirira kwake kunofadza kwakamuita kuti atange izvo zvaizivikanwa se "Steel Ball Hospital" iri pamhenderekedzo yeLake Erie. Iyo nhanhatu nenyaya yakagadzirirwa mu 1928 uye yaiva 64 mamita akaenzana. Chipatara chinogona kusvika 3 atmospheres absolute (44.1 PSI). Zvinosuruvarisa, pamusana pehupfumi hwehupfumi hwehupfumi, hwakagadziriswa munguva ye1942 yezviputi.
Hyperbaric Chambers yakazogadziridzwa neuto mumauto e1940 kuti vabate vanhu vakadzika-vegungwa vane chirwere chekuora mwoyo.
Mune 1950, vanachiremba vakatanga kushandisa Hyperbaric Medicine panguva yekuvhiyiwa kwemoyo nemapapu, izvo zvakatungamirira kushandiswa kwayo kwecarbon monoxide chepfu mu 1960's. Kubva ipapo, pamusoro peCNLX miedzo yekliniki uye zvidzidzo zvekwakave zvakapedzwa kune mamwe mabasa akawanda ane chokuita nehutano nehuwandu hwemigumisiro yehupfumi inoburitsa kubudirira.
IHMS inotsanangura Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) sekupindira umo munhu anofema pedyo ne100% oksijeni intermittently mukati memukati yemahara inomanikidzirwa kusvika kune yepamusoro pemvura yakasimba (1 atmosphere absolute, kana ATA).
Nechinangwa chemakliniki, kuoma kunofanira kuenzana kana kudarika 1.4 ATA apo kufema pedyo ne100% oksijeni.
IUnited States Pharmacopoeia (USP) uye Compressed Gas Association (CGA) Bhuku A rinotsanangura mabhiiji ekorojeni kuti isati iri pasi pe99.0% nehuwandu, uye National Fire Protection Association inotsanangura USP grade grade oxygen.
Mune mamwe mamiriro ezvinhu inomiririra yekutanga kurapwa kwemaitiro asi kune vamwe iyo inogadziriswa pakushandura kana kupindira mune zvem pharmacologic.
Kurapa kunogona kuitwa mune imwe Monoplace Hyperbaric Oxygen Therapy Chamber kana Multiplace Hyperbaric Oxygen Therapy Chamber.
Monoplace Hyperbaric Oxygen Therapy Chambers kunogara murwere mumwe chete; iyo yose kamuri inomanikidzirwa pedyo ne100% oksijeni, uye murwere anofuridzira chipinda chemukati oxygen zvakananga.
Multiplace Hyperbaric Oxygen Therapy Chambers kubata vaviri kana kupfuura vanhu (varwere, vanocherechedza, uye / kana vashandi vekutsigira).
Multiplace Chambers inomanikidzirwa nemhepo yakamanikidzwa apo varwere vanofema pedyo ne100% okisijeni kuburikidza nemasikisi, misoro yemusoro, kana endotracheal tubes.
Maererano neHMS tsanangudzo uye kusarudza kweCenter for Medicare neMedicaid Services (CMS) uye zvimwe zvevatakuri vebato rechitatu, kuwedzera kufema kwehutano 100% oksijeni pa1 mumhepo yekumanikidzwa kana kuisa zvikamu zvakasara zvemuviri ku100% okisijeni hazviiti Hyperbaric oxygen therapy.
Murwere weHyperbaric anofanira kugamuchira oksijeni kuburikidza nekuputika mukati memukamuri yakamanikidzwa. Nhasi ruzivo runoratidza kuti kushungurudza kunofanira kunge kuri 1.4 ATA kana kupfuura.
Iko kune ikozvino 14 zvinoratidzwa zviratidzo muU.SA.
Mhepo kana Gasi Kunyunyuta
Clostridial Myositis uye Myonecrosis (Gas Gangrene)
Crush Injury, Compartment Syndrome uye Other Acute Traumatic Ischemias
Kugadziriswa kusina kukwana
Delayed Radiation Injury (Soft Tissue naBony Necrosis)
Kugadziriswa Grafts uye Flaps
Kupisa kwakanyanya Kunopisa Kukuvadza
Idiopathic Sudden Sensorineural Kunzwa Kurasikirwa
Chii chisisiri Hyperbaric Chamber?
Nyaya yepamusoro ye okisijeni, kana Topox, inotungamirirwa kuburikidza nekamuri duku rinowanikwa pamusoro pemagumo uye rinomanikidzwa neoksijeni. Murwere haafumisi oksijeni, uyewo zvakasara zvemuviri zvinomanikidzirwa. Nokudaro, murwere haagoni kubatsirwa nehuwandu hwezvakanaka zveHyperbaric Medicine, iyo inogadziriswa kana kuti inoitika pane imwe yakadzika kupfuura inopisikiyamu inopinda inopinda (ona Hyperbaric Physics uye Physiology chikamu chiri pasi apa). Topox inobva pamusoro wekuti oxygen inopararira kuburikidza nemateu paakadzama 30-50 microns.  Iyi nzira haina kubata DCS, arterial gas inonzi (AGE), kana carbon monoxide (CO) chepfu.
NeTopox yakagadziriswa kusiyanisa kunetseka kunofanira kusikwa pakati pemichina uye yakazaruka mhepo kuti inomanikidza mishonga. Kuti uchengetedze mhedzisiro kubva pakusundirwa kunze kwemichina yakamanikidzwa, mukombe webhokisi unofanirwa kuenzana zvakasimba kumativi ose, nokudaro uchigadzira tourniquet semigumisiro. Topox haisi yakafukidzwa nenishuwarenzi, uye haibvumirwi nepepanhau reSaabetes Care kuitira kurapwa kwezvakarukwa.
Imwe mhando yekamuri ndiyo inoshandiswa Mild Hyperbaric Chamber. Iyi midziyo ine tsvina inogona kuomeswa ku1.2-1.5 atmospheres absolute (ATA). Ivo vanobvumirwa chete neDFA kuitira kurapwa kwehutano hwekurwara. Zvizhinji zvezvikamu zvepamusoro Zvirwere zvipfeko zvinotengeswa zvisina kunaka se "Dild Hyperbaric Chambers" zvisingabvumirwi kunze kwemavara.
Physics uye Physiology ye hyperbaric mishonga
Firiksi iri shure kweHyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) iri mukati memitemo yakanaka yegesi.
Kushandisa mutemo waBoyle (p1 v1 = p2 v2) kunoonekwa mune zvakawanda zveHyperbaric Medicine. Izvi zvinogona kubatsira kune embolic phenomena dzakadai se decompression urwere (DCS) kana arterial gas inonzi (AGE). Sezvo kuwedzera kuri kuwedzerwa, ivhu rayo pamusoro pemabhuru rinoderera. Izvi zvinovawo zvinokosha nekodzero yekodzero; kana murwere achimubata kufema, iyo yakawanda yegesi yakavharirwa mumapapu pamusoro pekuwedzera uye inogona kukonzera pneumothorax.
Mutemo weCharles ([p1 v1] / T1 = [p2 v2] / T2) inotsanangura kuwedzera kwekushisa kana mudziyo uchidzvinyirirwa uye kuderera kwekushisa nekudzvinyirira. Izvi zvakakosha kuyeuka kana kurapa vana kana varwere vanorwara zvikuru kana kuti vanoridzirwa.
Mutemo waHenry unotaura kuti huwandu hwegesi hwakanyungudutswa mumvura hunoenzana nekumanikidzwa kwegasi kunoitwa pamusoro pemvura. Nokuwedzera dambudziko remukati mukamuri, humwe okisijeni inogona kuparara mu plasma kupfuura inogona kuonekwa pamusana pekumanikidza.
Chiremba anofanira kukwanisa kuverenga kuti oksijeni murwere ari kugamuchira zvakadini. Kuti uenzanise chiyero ichi, atmospheres absolute (ATA) inoshandiswa. Izvi zvinogona kuverengerwa kubva muzana ye okisijeni mumusanganisi wegesi (kazhinji 100% muOxygen Therapy; 21% kana achishandisa mhepo) uye yakawedzerwa nekumanikidza. Mhirizhonga inoratidzwa mumakumbo emvura yegungwa, iyo inosangana nayo kana mumwe achiburukira kune iyo yakadzika ari mumvura yegungwa. Kudzika uye kumanikidza kunogona kuyerwa nenzira dzakawanda. Zvimwe zvinowanzoshandurwa zvakafanana 1 mumhepo = 33 mamita emvura yegungwa = 10 mamita emvura yegungwa = 14.7 mapaundi pahafu inch (psi) = 1.01 bar.
Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) Terminology
Hyperbaric oksijeni therapy inotsanangura munhu kufema 100 muzana oksijeni mukudzvinyirira kukuru kupfuura gungwa kusvika kune imwe nguva yakatarwa-kazhinji 60 kusvika ku90 maminitsi.
Kushushikana Kwemhepo - Mhepo yatinofema inoumbwa ne20.9 muzana oksijeni, 79 muzana nitrogen, uye 0.1 muzana magasi. Mhepo yakawanda inomanikidzwa nokuti ine uremu uye uremu uyu hunoenderedzwa kunzvimbo yepasi yenyika. Izvo zvinetso zvinowanikwa zvinoratidzirwa semhepo yakasimba. Dambudziko rekumhepo riri pamhenderekedzo yegungwa ndeye 14.7 mapaundi pahafu inch (psi).
Kudzvinyirira kweHystrostatic - Sezvaunokwira pamusoro pegungwa, dambudziko remhepo rinoderera nokuti kuwanda kwemhepo kunopfuura iwe kunorema zvishoma. Kana iwe uchinge ushambira pasi pegungwa, zvinopesana zvinoitika (kuwedzera kunowedzera) nokuti mvura inorema inopfuura mhepo. Nokudaro, yakadzika inoburuka pasi pemvura iyo yakanyanya kuoma. Izvozvo zvinonzi hydrostatic pressure.
Atmospheres Absolute (ATA) - ATA inoreva kuenzana kwezvinokonzera izvo ndezvechokwadi pasinei nenzvimbo. Nenzira iyi, kuwedzera kwakadzika kunogona kusvika kana iri pamusoro kana pasi pegungwa.
Pane mitemo yakasiyana-siyana yekuyera kuomeswa. HBO chirwere chinoshandisa simba guru pane iro rakawanikwa pasi pano pagungwa, iro rinonzi hyperbaric pressure. Izwi kana zvigadziriswa zvinoshandiswa kuratidza hutsinye hwemvura zvinosanganisira mamita mamita kana masendimita e mercury (mmHg, inHg), mapaundi pamasendimita masere (psi), tsoka kana mamita emvura yegungwa (fsw, msw), uye atmospheres absolute (ATA).
Imwe mhepo yakakwana, kana 1 ATA, ndiyo inowanikwa mumhepo yakamanikidzwa inowanikwa pagungwa, kana 14.7 psi. Mhepo miviri yakazara, kana 2 ATA, inowedzera kaviri kudengenyeka kwepasi kunowanikwa pagungwa. Kana chiremba anorayira awa imwe yeHBOT kurapwa pa2 ATA, murwere anopfuudza 100 muzana oksijeni kweawa rimwe chete paanenge kaviri kutengesa kwepanyika pagungwa.
Mibvunzo yeHyperbaric : Hyperbaric tsvaga : Hyperbaric Information